Usegadwa yisigansonso sensizwa uRiky Rick | News24
Usegadwa yisigansonso sensizwa uRiky Rick
Durban - Usahlala eqashwe ngeso lokhozi yisigansonso sensizwa umrepha wodumo osanda kulaxaza inkampani engundabuzekwayo iMabala Noise Entertainment (Mabala).
URicky Rick ogamalakhe langempela uRikhado Makhado usezitholele umqaphi omlandela noma yikuphi lapho eya khona. Ngokuthola kweLANGA LangeSonto kusukela lo mrepha ehlukane neMabala ephethwe nguReggie Nkabinde uzizwa engaphephile yingakho esethole umqaphi.
Leli phephandaba lizibonele lesi sigansonso esiqapha lo mrepha wodumo lwengoma "Sidl'ukotini" ngesikhathi ethulwa ngokusemthethweni njengobuso beVaseline Mens eKramerville eGoli ngoLwesithathu.
Kulo mcimbi obuhanjelwe ngosaziwayo nabezindaba uRicky Rick utheleke ehamba nomndeni wakhe okungumkakhe uBianca nezingane zakhe ezimbili nomqaphi wakhe.
OLUNYE UDABA: Odla ukotini uxoshwe yisitebele sakhe kulandela amagama ahlabayo
Lesi sidlakela sensizwa besimlandela yonke indawo lapho ebehamba khona nangesikhathi esekhuluma nabezindaba besikhona eduze.
Lo mrepha akafunanga ukuphawula ngokuqashwa kwakhe ngesikhathi leli phephandaba limbuza. Uphendule ngokuthi kubalulekile ukuthi uma ungumuntu onomndeni uhlale uwuvikela ngaso sonke isikhathi.
Akathandanga ukuphawula ngokuthinta iMabala njengoba ekubeke kwacaca ukuthi usegxile ezintweni ezithinta igama lakhe kuphela. Uthi kuningi okwenzekayo kulo mkhakha abantu abangakwazi kanti uma isikhathi sesimvumela uzogeqa amagula ngakho konke okwenzeka empilweni yakhe.
Kuzokhumbuleka ukuthi uRicky Rick uzakhele isigcwagcwa kwiMabala ngenkulumo ayethule ngesikhathi kunomcimbi wamaMetro FM Music Awards.
Ekhuluma kulo mcimbi obuseNkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC) eThekwini ngoNhlolanja (Febraury) kuze kwaphoqeleka ukuthi avalwe kwazise uze wasebenzisa igama eliyinhlamba ezwakalisa ukunengeka kwakhe ngokwenzeka emkhakheni womculo.
Ukhuthaze abaculi abasafufusa ukuthi bangalindi ukuze umculo wabo udlalwe emsakazweni kodwa bazimakethe ngokusebenzisa ubuchwepheshe nezinkundla zokuxhumana. Ngesikhathi uRicky Rick ehlukana nale nkampani kubikwa ukuthi uphucwe izinto zikanokusho okubalwa kuzo nonyanyavu lwezimoto zohlobo oluphambili.
Ngaphandle komculo uRicky Rick ugxile kakhulu nakwimfashini njengoba abuye akhangise ngezimpahla zokugqoka kanti uke wabonakala emodela egqoke ingqephu kaDavid Tlale.
Isihloko se-albhamu kaRick Rick sithi "Family Values" kodwa ingoma adume ngayo yiyo lena ethi"Sidl'ukotini".
Ungumculi onekhono elibabazekayo yize ezibambele mazinyo izingoma azikhiphayo azimdumazi zenza kahle emakethe. Abantu abayi nganxanye bengemanzi yize kukhona abamgxeka ngokukhuluma kwakhe iqiniso kepha iningi limtuse kakhulu lathi uyiqhawe lamaqhawe.